Vaovao - Topi-maso ny Fitaovana Fitaovana
Fitaovana fanosotra etona ambonin'ny tany dia teknolojia fanovana ambonimbony novolavolaina ho setrin'ny fitakian'ny tsena. Hatramin'ny nisehoany tamin'ny taona 1960, dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny orinasa mpamokatra fitaovana fanapahana vy, indrindra taorian'ny fivoaran'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha, ny haitao fandrakofana dia novolavola haingana ary nampiharina ary nanjary iray amin'ireo haitao fototra amin'ny fitaovana fanapahana haingam-pandeha famokarana. Ity haitao ity dia mamorona karazana sarimihetsika manify eo ambonin'ilay fitaovana fanapahana amin'ny alàlan'ny fomba simika na ara-batana, mba hahafahan'ny fitaovana fanapahana hahazoana fampisehoana fanapahana feno tsara, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanapahana haingam-pandeha.
Raha fintinina, ny teknolojia famonoana fitaovana manapaka ambonin'ny tany dia manana ireto toetra manaraka ireto:
1. Ny teknolojia fanosotra dia afaka manatsara be ny hamafin'ny fitaovana tsy mampihena ny tanjaky ny fitaovana. Ny hamafin'izay azo tratrarina amin'izao dia manakaiky ny 100GPa;
2. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny haitao fandrakofana, ny fahamendrehana simika sy ny fanoherana ny okididra avo lenta amin'ny film dia nanjary nalaza kokoa, izay ahafahana manao milina haingam-pandeha;
3. Ny sarimihetsika fanosorana dia manana fahombiazana tsara amin'ny fanosorana, afaka manatsara ny kalitaon'ny fanodinana, nefa mety amin'ny fanapahana maina ihany koa;
4. Ny teknolojia fandrakofana, toy ny dingana farany amin'ny famokarana fitaovana, dia saika tsy misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fitaovana, ary azo averina miverina ny fizotrany.
Ny tombotsoan'ny fitaovana fanapahana mifono: afaka manatsara be ny ain'ny fitaovana fanapahana; manatsara ny fahombiazan'ny fanapahana; manatsara ny kalitaon'ny tontolon'ny asa vita; Mampihena ny fanjifana fitaovana ampiasaina, mampihena ny vidin'ny fanodinana; mampihena ny fampiasana coolant , mampihena ny vidiny, manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fitsaboana marina ny fitaovana fanapahana boribory kely dia afaka manatsara ny fiainam-pitaovana, mampihena ny fotoana famolavolana milina ary manatsara ny kalitaon'ny masinina. Na izany aza, ny fisafidianana ny fonosana fitaovana mety amin'ny filan'ny milina dia mety ho asa manasatra sy miasa mafy. manapaka, ary raha tsy mety ny manarona azy, dia mety hiteraka fiainana mahantra kokoa noho ny fitaovana tsy miakanjo, indraindray miteraka olana bebe kokoa noho ny talohan'ny firakotra.
Misy karazana palitao isan-karazany misy, ao anatin'izany ny firakotra mifangaro mifangaro PVD sy CVD. Ity takelaka ity dia azo alaina mora foana avy amin'ireo mpanamboatra fitaovana na mpamatsy firakotra. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra toetra mampiavaka ny fametahana fitaovana ary ny sasany safidy safidy famafana PVD sy CVD mahazatra. mahasoa amin'ny fanapahana.